Ziziphi i-10A zeBanga zeNwele? Ziziphi i-10A zeBanga zeNwele? Izandiso Zeenwele Zenwele
Ziziphi i-10A zeBanga zeNwele? - Soie Virgin Hair Extensions
Ziziphi i-10A zeBanga zeNwele?
Izinwele zebakala ze-10A yizona ziphezulu zeentloko zobuntombi ezinyulu. Ngaba uke wathenga iinwele zobuntombi zobuntombi kwaye kwaphela inyanga ezimbalwa kwiinyanga ezimbalwa? Ewe, qagela ntoni ?! Wathengiswa ngezantsi kweenwele ze-10A! Ngoku, ukuba umntu utshintshe izitayela ngokuqhelekileyo okanye ufuna kuphela isitayela esithile kwisiganeko esikhethekileyo, oku kungenako ukutshala imali okubi. Kodwa, kubaninzi ababeka imali yabo enzima ekuthengeni iinwele ezinyulu ezithengiswa ngokuthi "zilungileyo" kwaye "zihlala ixesha elide", oku kunokudanisa. Kodwa ungakhathazeki! Nantsi ingcaciso engaphakathi ngaphakathi kweenwele zeBlack 10A kwaye kutheni iyaziwayo ...
Ndiza kuqala ngento ongakufuni ukuyiva. Kukho ibakala eliphantsi, phakathi kwebanga kunye neeklasi zezinga eliphezulu kwaye likwafakwa njenge-remy, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A kunye ne-10A. Ababoneleli abalawula iibhola zentloko ezinobuntwini abanamakhwenkwe abanokuthi bahlale bethetha inyaniso malunga nobunjani beenwele. Abanye ababoneleli nge-10A bangaba yi-6A yomnye. Kwakhona, ezinye iinkampani ezithengisa iinwele ezinyulu zifuna ukuthenga iinwele eziphantsi ezantsi kwiindleko eziphantsi kwaye zithengise kuwe njengezinwele eziphezulu, kodwa ixabiso alikholwanga, ngoko uyithenge! Ingxaki kukuba ezinyangeni ezimbalwa sele ichithe kakubi, iqhube okanye ilahlekelwe yinkanuko phakathi kwezinye iingxaki. Yingakho thina kwi-Soie Hair Extensions zijolise kwi-LONGEVITY kunye ne-PROCESS yezinwele zethu zobuntombi ukufumana ibakala langempela.
Ngoku ukuba inyaniso embi ingekho endleleni, nakhu izizathu ezithile zokuba i-10A (iibhokhwe zezona ziphezulu zezona ziphezulu):
- Inkqubo engeyiyo yamachiza. Ezinye iinwele zikhishwa ngamakhemikhali ukuze zitshintshe iipateni zengqungquthela, njl. (Oku akubandakanyi iinwele zentombi zentombi)
- Iimpahla ezipheleleyo ukusuka phezulu ukuya ezantsi. Khangela iziphetho eziphambili. Oku kusenokuthetha ukuba iinwele ezininzi zabaxhasi zazisetyenziselwa ukwenza iincuku okanye iinwele ezithe zasetyenziswa.
- 100% iinwele zabantu. Akukho mveliso okanye nayiphi enye idibeneyo.
- Amathrekhi aphindwe kabini. Ezinye iinwele ziza kumathrekhi angamaqeshwe kunye kunye nokwandisa ukucinywa.
- Abaxhasi be-1-2. Unomgangatho ophezulu kunye nokuhambelana nomlinganiselo omncinci weenwele zabanikiyo.
Buyela kwizihloko zeenwele ezifudumele